SIDEE LOO DHIGAA XAYAWAANKA EYGA EE NAFTAADA - INFRASTRUCTURE
Waxa aad u baahan tahay inaad tixgeliso si aad u dhisatid xayawaan eyda
Markii hore, eeyaha ku noolaa deyrka, waxay dhiseen kabaha waxayna ku xidhxidheen silsilad. Maanta, sii kordhaya si ay u dhisto dhismaha meelo waaweyn. Dhinaca kale, eeygu ma heli karo meydka martida ee soo galaya barxadda, dhanka kalena, qoorta mar dambe qoorta iskuma dhicin, oo ilaaliyaha aaminka ahi wuxuu u guuri karaa gurigiisa si uu dhererkiisu dhan yahay. Waxyaalahaan, waxaan kugu martiqaadeynaa in aad barato farsamada ah sameynta saxda saxda ah eeyahaaga gacmahaaga.
Halkee laga bilaabaa
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato ujeedada dhabta ah ee aviary. Ka dib dhan, waa in aysan ahayn oo kaliya xayndaabka caadiga ah eeyga. Dhismaha saaxiibkaa iyo ilaaliyaha ayaa kuugu dhow maalintiiba. Sidaa darteed, dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay ee noloshooda caadiga ah ee raaxada ah waa in si cad loo fekero. Tusaale ahaan:
quudinta xayawaanka laga cuno eey ey cunayaan;
meel uu ku dhuuman karo haddii ay dhacdo cimilo xun, qabow ama qorrax;
Intaa waxaa dheer, waa inaad ka fekertaa sida ay u sahlanaan lahayd nadiifinta aviary, sababtoo ah eyga ayaa sidoo kale u baahan doona.
Marka xigta, waa in aad go'aansatid meesha ay aviary u qalabeysan tahay, cabirkeeda. Cabbirrada ayaa lagu xisaabinayaa iyadoo ku xiran hadba nooca xayawaanka.
Ma taqaanaa? Seynisyahadu ma gaari karaan fikrad la isku raacsan yahay oo ku saabsan asalka eeyga guriga. Qaarkood waxay aaminsanyihiin in ay haysato dhowr awoowood: yey yahiin iyo jackal. Qaar kale waxay u hoggaansamaan aragtida ah in eeyuhu ay ka yaraayeen oo keliya halis, sida lagu muujiyey falanqayn isbarbardhigi ah oo ku saabsan qaar ka mid ah astaamahooda iyo natiijooyinka daraasadaha unugyada molecular.
Dooro meel ku haboon
Doorashada booska waa in sidoo kale loo sameeyaa sida waafaqsan mudnaanta in eeygu tahay mid raaxo leh. Waa inaan laga caroodin qaylada gawaarida, sidaas darteed haddii ay suurtagal tahay inaad guriga ka baxdo wadada. Dhismayaasha xayawaanka kale ee xayawaanka kale waa in lagu dhejiyaa meel fog. Sida goobaha aad ku biirto nijaarnimada ama aad sameyso shaqo kale oo qotodheer. Wicitaanka aan fiicnayn sidoo kale waa inuusan gaarin gurigaaga xayawaankaaga, tusaale ahaan, musqusha ama qasabadda.
Fikrad ahaan, ilkuhu waa in ay ku yaalaan 500 m oo ka baxsan qafiska furan, tusaale ahaan, aagga miyiga ah ama xero xagaaga oo weyn, iyo 10-15 m oo ku yaalla aqal gaar ah ama aqal dhisme.
Waxaa kale oo aad xiiseyneysaa inaad barato sidii loo dhisi lahaa coop digaag, qafis iyo bakayle.
Guryaha loogu talagalay xayawaanka waa in la dhigaa meel u dhow geedaha si ay xayawaanku u leeyihiin meelo lagu nasiyo inta lagu jiro maalinta.
Habeenkii, waa in laydhka la iftiimiyo - waa in sidoo kale la tixgeliyaa: Miyuu suurtagal noqon karaa caawinta iftiinka dhexe ama ma iftiin karaa? Meelaha loo qorsheeyay in lagu qalabeeyo xero waa in lagu dejiyaa dabaylaha. Waa inaanay noqon meel ku taal geeska fog - eeygu wuxuu u baahan yahay inuu ilaaliyo waxa ka dhacaya dayrka iyo albaabka.
Goobta lagu taliyey ee dhismaha waa koonfur-bari.
Meesha ugu fiican waxay ku jiri doontaa qaybta hore ee u dhow albaabka albaabka, dhinaca dhinaca wadada ee u horseedaya guriga.
Xisaabi aagga iyo dhererka
Meelaha iyo dhererka xayiraadda waxaa lagu xisaabiyaa xajmiga xayawaanka. Goobta waxaa ka mid ah ugu yaraan. Mid ka mid ah dhinacyada waa inay ahaadaan ugu yaraan 2 m.
Waa kuwan tilmaamo dhowr ah oo lagu dhisayo xayawaanka eyka iyo cabbirka:
Wixii eyda leh dhererka oo ku dhajiya illaa 50 cm, aagga ugu yar ee xero waa inay ahaataa ugu yaraan 6 mitir oo laba jibbaaran. Guriga labo eey ama hal qashin oo leh caruurtani waa inaanay ka yareyn 9 mitir oo laba jibbaaran. m
Eeyaha 51-65 cm ee dhererka weyn, aagga hawo furan ee 8 mitir oo laba jibbaaran ayaa loo baahan yahay. m. Labo eey ama dheddig ah oo leh dabeecadaha - min 12 mitir oo laba jibbaaran. m
Xayawaanka ka sarreeya 66 cm waa in lagu hayaa qafis hawo furan 10 mitir oo laba jibbaaran. m. Labo eey ama dheddig ah oo leh dabiiciyadoodu waxay u baahan yihiin inay u qalmaan qolka cabbirka 15 mitir oo laba jibbaaran. m
Haddii la qorsheynayo in afarta lugoodba ay maalin uun ku qaataan aviary, habeenkiina waxay ku socon karaan hareeraha deyrka, aagga kaararka ayaa laga yareeyn karaa.
Dhererka eeyga "dabaq" waa inuu ahaadaa eeygu istaagaan ilaa dhererkiisa oo dhan lugihiisa lugaha, adigoon taaban salka. Marka habka, haddii xayawaanku weli yar yahay, oo aadan garanaynin sida ay u weynaan doonto, waxaad ku xisaabtami kartaa xisaabinta, ogaanshaha xajmiga boogaha, xabadka, miisaanka iyo xuduudaha kale. Tusaale ahaan, mid ka mid ah sheyga khaaska ah wuxuu sheegaa in miisaanka ilmaha yar laba bilood ay tahay in lagu dhufto sadex iyo in lagu daro 200 g - tani waxay noqon doontaa tirada dadka weyn.
Ma taqaanaa? Eeygii ugu weynaa ee adduunka ah, oo lagu diiwaan geliyey buugga Guinness Book of Records, ayaa loo aqoonsan yahay inuu yahay Great Dane oo magaciisu yahay Great Zeus. Heerkiisuna waa 111.8 cm, culeysna - 70 kg. Wuxuu la nool yahay milkiilayaasha Mareykanka. Iyo eeyga ugu da'da weyn waa Australian Blue. Waxa uu ku noolaa 29 sano iyo shan bilood.
Kadib marka cabbiraha xayiraad ee eeyaha leh gacmahooda ayaa la go'aamin doonaa, waa lagama maarmaan in sawir lagu sawiro. Waxaad qaadan kartaa saldhig udub-sameynta, tusaalooyin kaas oo laga heli karo internetka. Caadi ahaan xayiraadyada iyaga ku yaalla waxay ka kooban yihiin xuduudaha xuduudaha leh:
jidka jiilaalka leh booth iyo aan lahayn;
Sawirku waa inuu sidoo kale calaamadiyaa meelaha si toos ah loogu soo gali doono waddada iyo jiilaalka. Waxa kale oo suurtogal ah in la sawirto qorshaha cirifka si waafaqsan fikradaha u gaarka ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la isku dhejiyo qaybo ka mid ah. Tusaale ahaan, waddo jiil ah oo ku jira dabool furan oo dhererkiisu yahay 4 m waa inuu ahaadaa ugu yaraan 1.5 m, 1.5 m oo kale waa in loo qoondeeyaa mashiinka. Inta kale ee bannaanka waa in lagu tagaa meel socod ah.
Waa muhiim! Ku guuldareysiga raacitaanka xeerarka ku saabsan doorashada xajmiga iyo walxaha boorashka waxay horseedi karaan eyga oo ka cabanaya xaalado aan fiicneyn, isku dhufashada cudurada iyo khatarta ku imaan karta booqdayaasha haddii wax waliba ay noqoto mid aad u muuqata oo aan ilaalin karin ilaaliyaha diciifka ah.
Ka dib sawir diyaar ah, waa lagama maarmaan in la fekero oo la iibsado alaabta loogu talagalay eeyda eyda. Halkan waxaa ku yaal talooyin kooban oo ku saabsan waxa ugu wanaagsan ee lagu sameeyo darbiyada, albaabada, saqafka iyo dabaqa, sidaa darteed xayawaankaagu wuxuu ahaa mid degan oo raaxo leh.
Derbiyada iyo albaabka
Darbiga hore, oo u adeegi doona eyga si dib loogu eego barxadda, waa inuu ka jiraa cirifka. Isla mar ahaantaana, laguma talin in la isticmaalo shabakad - afar lugood oo waaweyn ayaa si sahlan ugu qaadi kara boorsooyinkooda ama jabiyaan ilkahooda iyaga ku saabsan. Xalka ugu fiican waa in la isticmaalo tuubooyinka wareega ama wareega biraha. Waa in aan la galin ama lagu ridin. Waa lagama-maarmaan in la isku karsado iyaga oo midba midka kale tayo leh, gaar ahaan haddii xayawaankaaga uu yahay mid weyn oo culus.
Meelaha u dhexeeya tuubooyinka waa inay ahaadaan 10 cm xayawaanka waaweyn iyo 5 cm xayawaanka yaryar.
Dhismayaasha birta iyo xirmooyinka nabdoonaanta afar lugood waa in si fiican loo daboolaa, laga nadiifiyo cayayaanka, ka saarista dufka iyo daboolka enamel kulul.
Waxaa jira ikhtiyaari ah in lagu qalabeeyo shabakad la'aan iyada oo aan mashiinka alxanka. Si tan loo sameeyo:
uluhuna way wanaagsan yihiin inay dhulka ku socdaan;
diyaariyaan qoryaha alwaax, dhererka oo u dhigma dhererka qashinka;
samee qariidada baararka fogaanta biraha birta;
ku dheji qaansooyinka barafka mid kasta oo ka mid ah ulaha;
hagaajinta geesaha - godadka qodista ee baararka iyo geesaha kuna xir dhejiyada.
Dhinaca iyo gadaasha eeyga "flat" waxa laga samayn karaa qoryo, laakiin aan ka yareynin 2 cm, lakab, faallo bir ah. Darbiyadaha derbiyada waa in lagu daaweeyaa wakiilada caydhu. Waxay u fiican yihiin caafimaadka xayawaanka.
Waa muhiim! Qodobbada loo isticmaalo xakamaynta waa inay ahaato mid adag. Qaybaha geedaha waa inaysan taaban dhulka.
Maaddooyinka sida ondulin, foornada jilicsan, mishiinka, iwm ayaa loo doortaa saqafka, waa ka wanaagsan tahay haddii shingles, maxaa yeelay qulqulaha qulqulaya waxay ku dhawaaqaan ugu yaraan qaylo iyo xayawaanka xayawaanka.
Marka la rakibo ciddiyaha dabbaasha waa inaan loo isticmaalin.
Qeybta qasabka ah waa inay ahaato mid qalaad.
Dabaqa waxaa laga samayn karaa wax la taaban karo ama asfalt. Shubanka laguma talin sababtoo ah waa mid aad u qabow. Dhanka kale, xayawaankaaga ayaa jabin doona, marka lagu daro, waxaa jira khatar ah in uu ku dhaco cudurka rheumatic ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa fiican in laga fekero lakabyada dhoobada ah, oo la dhigo dabaqa gacmaha ama dhulka. Ma dabooli karaan dabaqa oo dhan, laakiin kaliya qayb ka mid ah. Waxay noqon doontaa qulqul ku filan labo laba mitir.
Sidoo kale, salka la taaban karo ayaa lagu xakameyn karaa burburka, isaga oo u dhexeynaya ciidda iyo la taaban karo.
Muhiim ma aha inaad buuxiso dabaqa oo dhan ee aviary, waad ka bixi kartaa qayb ka mid ah carrada lagu beeray cawska. Dabadeedna saaxiibkaa wuu socon doonaa.
Jinsiga waa in aan si siman loo samayn, sababtoo ah qoyaanka ayaa ku xiran. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso meerto yar.
Maxaa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo
Ka dib markii uu kaabaha diyaar u yahay, waa lagama maarmaan in wax laga qabto qorshahiisa: samee daadi (haddii la bixiyo), xayawaanka quudinta, albaabada gala. Albaabku wuxuu u baahan yahay in la sameeyo si uu u furo bartamaha xeryaha. Heck waa inuu ahaadaa dibedda iyo gudaha.
Hoyga ugu fiican ee eeygu wuxuu noqon doonaa mid leh qalab dhisme. Waxay ku jirtaa in xayawaanku ku qaadan doono muddooyinka qabow gaar ahaan.
In dhismaha waa in sidoo kale tixgeliyaa arrimaha qaar:
Boorsada waa inay si cad ugu xiran tahay eeyga eeyga - waa in lagu dhejiyaa meel ballaaran oo leh meel bannaan. Haddii aad xayawaanka ku dhejisid, waxay noqon doontaa qabow, ma awoodi doonto in ay diirimaaddo.
Qalabka dhismaha waa inuu ahaadaa alwaax gaar ah. Waxaa fiican inaad doorato dhismaha qoryaha waaweyn.
Haddii aad ku nooshahay gobollada ay jiraan gaar ahaan garoomaha gaar ahaan daran, ka dibna dhismaha waa in la sameeyaa derbi-gacmeed, meesha u dhexeysa oo la dhigo rinjiga.
Xulashada ugu fiican ee loo oggol yahay in la nadiifiyo sanduuqa ayaa noqon doona saqafka la kala saari karo.
Waxay u fiicantahay in saqafka lagu dhejiyo xayndaab - xayawaanno qaar ka mid ah oo jecel inay isticmaalaan booskan kuraasta si ay ugu sahlanaato in la ilaaliyo dhulalka loo dhiibay.
Waxaa si adag loo mamnuucay in la isticmaalo marinka gudaha ee rinji ama rinjiga lagu shaqeynayo.
Boorashku waa mid la jecelyahay, laakiin maaha mid qasab ah oo ka mid ah xayiraadda. Si aad u samayso ama u sameyso, waxay ku xirnaan doontaa sida iyo habka ay u socoto jidka jiilaalka loo dhisay. Haddii ay si fiican u daboolan tahay, markaa ma jirto baahi loo qabo booth.
Quudinta waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo dhererka 20-30 cm dhulka.
Baro sida loo sameeyo quudiyaha shimbiraha ah iyo quudinta bakeeriga ee bakaylaha leh gacmahaaga.
Markaad qalabaynayso meesha eeygu cuni doonto, waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto sida loo badbaadin karo qof kale ama qof aan aqoon, haddii aad waqti dheer guriga ku maqnayd. Waxaa ka wanaagsan in laga fekero habka isbedelka loogu talagalay quudinta iyo qalabka loogu talagalay in lagu hagaajiyo booska xiran.
Badbaadada xayawaanka, nuujiyaha waa in lagu dhejiyaa derbi bannaan.
Ma taqaanaa? Waqtiga domestication ee eyda waxaa loo tixgeliyaa inay tahay muddo ah 31.7-36.5 kun oo sano BC. (Upper Paleolithic). Natiijada cilmibaadhayaasha cilmi-baarista ee taariikhda taariikhda dabiiciga ah ee taariikhda dabiiciga ah (Beljam) waxay heleen hadhaagii eeyga ee eyga wakhti hore ah, waxaa la ogaaday inay ka tirsan yihiin taariikhdan.
Ugu dambeyn, waxaan dooneynaa inaan ogaano in xayiraadaha la iibsan karo oo diyaar ah. Si kastaba ha noqotee, marwalba ma tixgeliyaan dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay si loo ilaaliyo eeyaha. Iyo yaa, haddii aanad, ogaan karin waxa xayawaankaaga u baahan yahay. Iyada oo haysashada xirfadaha ugu yar ee lagu shaqeynayo mishiinka alwaaxda iyo qoryaha, ma aha mid aad u adag in la xalliyo hawshan, iyo inay sameyso guri kaas oo ah qof caafimaad leh oo ku qanacsan afar lammaane iyo daryeele ayaa ku noolaan doona.
Begonia Cleopatra - qurxinta ugu fiican ee xafiiska gudaha ama aqalka
Dhuxul sida bacriminta beerta, isticmaalka bacriminta dhirta sii kordhaya
Noocyada ugu caansan ee caanaha hilibka
Iska jooji kharajka magaca geedka ubaxyada ama talooyin ku saabsan sida si habboon loo gooyo curonia
Sida loo isticmaalo irbadaha geedaha loo isticmaalo ujeedooyin daaweyn
Sababtoo ah hoos u dhaca wax soo saarka sonkorta adduunka, iyo gaar ahaan Midowga Yurub, India iyo Thailand, yaraanta sokorta ayaa suurtagal ah adduunka. Yaraynta aagga kordhinta cawska iyo sonkorta sonkorta waxay saamaysaa isbeddellada caalamiga ah ee wax soo saarka sonkorta. Sida laga soo xigtay khabiiro, Bishii Oktoobar-Sebtembar 2019-2020 sonkorta yaraanta waxay noqon doontaa 4 milyan oo tan. Read More
Celery - "Cows of happiness" qof kasta
Baradhada Ukriga "in vitro" koray Kherson